I-Oclean X Pro Smart Toothbrush - Khohlwa Odokotela Bamazinyo | TeraNews.net
Isixubho se-Oclean X Pro esihlakaniphile - khohlwa ngodokotela bamazinyo
umbhali Nikitin Eugenius Kushicilelwe ku 01.11.2021
Imikhiqizo ye-Oclean brand ayidingi singeniso. Uma kuziwa emikhiqizweni yenhlanzeko yomlomo, lolu hlobo lungowokuqala ukusiza. Umkhiqizi ukwazile ukuhlanganisa ubuchwepheshe obuphezulu kalula, enikeza umthengi izimpahla ngentengo engcono kakhulu. Isixubho esihlakaniphile se-Oclean X Pro siyahluka. Okuhle ukuthi umkhiqizi wenze umkhiqizo ofanele futhi wakwenza kwaba nokwenzeka ukuwuthenga ngentengo ephansi.
Isixubho se-Oclean X Pro esihlakaniphile - izinzuzo
Nakanjani, intengo ethengekayo iyona inzuzo enkulu. Ngaphezu kwalokho, engxenyeni yayo, uhlobo lwe-Oclean alunabo abaqhudelana nabo abaningi. Ngezansi ungabona imininingwane ngokuqhathanisa i-Oclean X Pro, isibonelo, nomkhiqizo owaziwa kakhulu we-Oral-B.
Izinzuzo ze-Oclean X Pro smart toothbrush:
Ukuphatha okuhle. Ukuba khona kwesikrini esithintwayo esine-diagonal engu-0.96 amayintshi akuwona neze ukweqisa. Kungani unganikezi umnikazi ngokulawula okunembile nokuhlinzekwa kwamamodi akhethiwe. Asikho isidingo sokuchofoza izinkinobho, ukhetha imodi elula - konke kulula kakhulu. Ngendlela, ukuklama kwebhulashi lamazinyo akuzange konakale. Ngokuphambene nalokho, i-Oclean X Pro ibukeka njengegajethi yakusasa.
Ukuhlanza amazinyo okusezingeni eliphezulu. I-Maglev brushless motor ikwazi ukunyakaza okungafika ku-42 ngomzuzu. Lokho kuningi, ngisho nanganoma yisiphi isixubho sikagesi.
Uhlelo lokuhlanza amazinyo oluhlakaniphile. I-Oclean X Pro ine-gyroscope ekwazi ukubona isiqondiso sokunyakaza, i-engeli yokuthambekela kanye nokucindezela kwebhulashi koqweqwe lwawo lwamazinyo. Hhayi-ke, yilokhu kanye esingakaze sikubone kuzixubho zebhajethi.
Izindlela eziningi zokuhlanza. Yenza izibalo - izindlela zokuhlanza ezi-3 (okuvamile, ukumhlophe nokubhucunga). Amazinga wokuqina angama-32 (kanye nezindlela zokusebenza - lokhu sekuvele kuyizinguquko ezingama-96). Nezinye izilungiselelo ezingu-20 ezenziwe ngomumo kumemori yesixubho se-Oclean X Pro. Akulona iqiniso ukuthi umnikazi uzozisebenzisa zonke, kodwa nakanjani uzothola inketho efanelekile yokuxubha amazinyo akhe.
Ukuzimela okuhle kakhulu. Umkhiqizi uthi ibhulashi lizosebenza izinsuku ezingu-30 ngokushajwa kwebhethri elilodwa. Ngendlela, ukushaja ibhethri kuthatha amahora angu-2 kuphela. Ngisho nokuhlanza okujulile, i-Oclean X Pro idlula zonke izimbangi zayo izikhathi ezingu-2-3 ngokwesikhathi sokusebenza.
Izixubho ze-Oclean X Pro vs Oral-B iO 8
Omunye uzothi awukwazi ukuqhathanisa imikhiqizo yomkhiqizi waseShayina nomkhiqizo owaziwayo eJalimane. Futhi kuyoba okungalungile. Mayelana nokusebenza, u-Oclean wenze kahle kakhulu kunombangi obiza kakhulu u-Oral-B. Yebo, kukhona amaphutha ohlelweni lokuhlinzeka. Isibonelo, i-Oral-B iO 8 iza nesiteshi sokushaja kazibuthe futhi inesibali-sikhathi esakhelwe ngaphakathi esinenkomba yokukhanya. Kodwa ukukhokha izikhathi ezi-2 ngaphezulu kulawa ma-nuances kuyabiza ngandlela thile.
Umkhiqizi I-Oclean X Pro (China) I-Oral-B iO 8 (Germany)
Impilo ngenkokhelo eyodwa Izinsuku ze-30 Izinsuku ze-14
Isibonisi sombala Yebo Yebo
Ukuxhumana kwe-smartphone Yebo (ukulandelwa okugcwele kokuhlanza) Yebo
Ukuhlanza izindlela 3 (kukhona ukufakwa okungu-20) 6
Amazinga okuqina 32 1
Ubuchwepheshe I-Ultrasound Magnet
Ibhulashi ukuma kwekhanda Oval Umbuthano
Ukuhlanza nsuku zonke Yebo Yebo
Ukunakekela izinsini Yebo Yebo
Ukuhlanza ochwepheshe No Yebo
Ukuhlanza ulimi No No
Inkomba elula yokuhlanza okulungile (okungalungile). No Yebo
Isikhathi ngokuhlanza isikhathi Yebo Yebo
Ukudlidliza Yebo Yebo
intengo enconyiwe $ 120 $ 300
Ngokwengqikithi yomkhiqizo wase-China i-Oclean, isixubho se-Oclean X Pro esihlakaniphile sinikezwa iwaranti esemthethweni yomkhiqizi weminyaka engu-2. Lokhu kusikisela ukuthi inkampani ikhiqiza imikhiqizo yekhwalithi ephezulu ngempela. Umthengisi angathumela izimpahla ezindlini zokugcina izimpahla ePoland noma eRussia - lokhu kuqinisekisa ukulethwa kwezimpahla ngokushesha kubathengi.
Ungathenga isixubho se-Oclean X Pro nge lesi sixhumanisi ku-aliexpress... Sincoma ukusebenzisa amakhuphoni esaphulelo:
I-SPTOWH150 (oda ngaphezulu kwama-ruble angama-690 - isaphulelo sama-ruble angama-150).
I-SPTOWH250 (oda ngaphezulu kwama-ruble angama-1290 - isaphulelo sama-ruble angama-250).
I-SPTOWH350 (oda ngaphezulu kwama-ruble angama-1990 - isaphulelo sama-ruble angama-350).
I-SPTOWH450 (oda ngaphezulu kwama-ruble angama-2690 - isaphulelo sama-ruble angama-450).
I-SPTOWH600 (oda ngaphezulu kwama-ruble angama-3490 - isaphulelo sama-ruble angama-600).
I-SPTOWH800 (oda ngaphezulu kwama-ruble angama-4890 - isaphulelo sama-ruble angama-800).